I-Stenleden | Vakashela uHultsfred
umphetho » 🥾 Bona futhi wenze » 👟 Imisebenzi » U-Andra Ukuhamba » Stenleden
EJärnforsen, kunenethiwekhi ephelele yemizila yokuhamba intaba enhle, yonke iqala khona kanye ngaphandle komphakathi. Ekuqaleni kunendawo yokosa inyama, ukupaka kanye nendlu yangasese, lapha kubuye kuqale umzila wokuzivocavoca nemizila enqamula ezweni yokushushuluza.
Umzila wamatshe ungamakhilomitha ama-3 ubude futhi muhle ngokumaka okwesibhakabhaka. Kuthatha uzungeze ngomgwaqo wehlathi uqonde ngqo ehlathini laseSmåland. Zizwe ukhululekile ukuvakashela iringi yonompempe. Ngokwesiko lendawo kumele ngabe bekuyinkantolo ebizwa ngendandatho yonompempe. Ngemuva kokutholwa enecala khona lapho, lezi zigebengu kumele ngabe ziphonswe e-Emån.
Ngenxa yelungelo lokufinyelela komphakathi, wonke umuntu angahamba ngokukhululeka ngemvelo yaseSweden. Funda kabanzi mayelana nelungelo lokufinyelela komphakathi kuwebhusayithi yeSikhungo Sokuvikelwa Kwezemvelo saseSweden
Izinto ezinhle ozohamba nazo ohambweni losuku kungaba ngamanzi, amachashazi, imephu, iselula, isendlalelo sejezi esengeziwe phezu kongqimba namasokisi.
Izinja akumele zikhululeke endle phakathi kukaMashi 1 no-Agasti 20.
Ukuzingelwa kwezinyamazane kwenzeka phakathi no-Okthoba.
Letha isikhwama semfucumfucu nezinsalela
Zazise nganoma yikuphi ukuvinjelwa komlilo okwamanje. Ezimweni ezijwayelekile, ungabasa umlilo, kodwa ungafaki amatshe noma amatshe bese uwucisha kahle umlilo.
Ekuqaleni kunendawo yokupaka, indlu yangasese, indawo yokuhlala kanye nendawo yokosa
Ungapaka futhi eduze neDomarringen bese uqala ukunyuka kwakho lapho!
Indlela yamatshe eGaia
Indlela yamatshe ephrojekthi yokuHiking
Indlela yamatshe e-Outdooractive
Umzila wamatshe ebalazweni lemvelo
Indlela yamatshe ku-Wikiloc
I-Delängsgatan, 570 81 UJärnforsen, Sweden
4.9 aphume ku-5.0
24 izibuyekezo ku-Google
Ishidi lesiteji elinemephu nolwazi
5/5 ngenyanga edlule
Ukuphoqeleka ukuthi ujike ngemva kwamakhilomitha ambalwa - iminyaka yobudala iyingozi kakhulu! - kodwa umzila uwucezu lwemvelo enhle ngendlela emangalisayo, engathinteki, uzizwa ushukumiseleka ezikhathini zasendulo. Ngaphezu kwalokho, IHLANZEKILE kakhulu, ayivamile neze ngemfucumfucu nezinduna, okubonisa ukucabangela okuhle, okungajwayelekile ezindaweni ezinabantu abaningi. 🤗 Ngakho-ke, bonke abancane & krya: Umsiki ogcwele kanye nebhasi, NGEKE UZISOLE ❣️
4/5 ngenyanga edlule
Bengingumuntu osheshayo lapha futhi angizange ngihambe umkhondo, ngakho-ke anginakho okuningi engingakusho ngakho, kodwa kuhle impela.
5/5 izinyanga 4 ezidlule
Ukuqwala izintaba kodwa kuyinselele
5/5 ngonyaka odlule
Umzila omkhulu wokuhamba izintaba nemvelo enhle! Imizila emakwe kahle futhi enhle enezimpawu zolwazi nemephu yephepha ekuqaleni kwendlela. Ingcenye yokugcina yeluphu ebomvu yabukeka ifiphele njengoba yayihamba ngokusikwa okukhulu okucacile. Ngaphezu kwalokho, imishini yehlathi yayisanda kwephula umhlabathi ezindaweni eziningana kanti nengxenye encane yendlela yayinyamalele ngenxa yalokhu. Lokhu kukhuphuka bekuyinselele impela futhi ngokusho kweselula yami, umzila wawungamamayela angu-1,38, hhayi u-1,2. Ngokufingqa, umzila omuhle kakhulu wokuhamba izintaba endaweni ebabazekayo, ungancoma impela!
Umzila omuhle wokuqwala izintaba ezindaweni ezahlukahlukene nezinzima ngokwengxenye
Yonke imizila yokuhamba izintaba
Thola iVirserum uwedwa